Taliban Pakistan Oo Magacaawday Amiir Cusub Kadib Istish-haadkii Mowlaana Fadlullaah. – Shabakadda Amiirnuur
June 25, 2018 5:58 am by admin Views: 183
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliban Pakistan ayaa lagu xaqiijiyay istish-haadka amiirkii jamaacada almulla fadlullaah kadib duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee drone-ka loo yaqaan.
Wasaaradda G/dhigga Mareykanka ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegtay in duqeyn ka dhacday gobolka Konaar ee dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan Afghanistan iyo Pakistan ay ku dileen amiirkii Taliban Pakistan oo washington ugu jiray liiska waxa loogu yeero Argagaxisada.
Muxamed alkhuraasaani oo ah afhayeenka xarakada Taliban Pakistan ayaa wakaaladaha wararka u xaqiijiyay in amiirka cusub ee xarakada loo magacaabay Sheekh Mufti Nuur waali Maxsuud “istish-haadka hoggaamiyaasha mujaahidiinta waa wax aan ku faanayno” ayuu yiri afhayeenka Taliban oo carrab dhabay in amiir cusub ay iclaamiyeen golaha shuuradaha mujaahidiinta.
Beytullaahi Maxsuud,Xakiimullaahi Maxsuud iyo almulla fadlullaah ayaa ahaa sedaxdii hoggaamiyay ee xarakada oo dhammaantood ku baxay duqeymo ay geysteen diyaaradaha dagaalka mareykanka.
Jamaacadan ayaa dagaal xooggan uga jirta gudaha Pakistan waxayna dhowr jeer weeraro ku beegsatay dad reergalbeed ah oo american kamid ahaayeen.
Mufti Nuur Waali Maxsuud amiirka cusub ee Taliban Pakistan ayaa horay ahaa amiir ku xigeenka wuxuuna bedelay Khaalid maxsuud oo ahaa ku xigeenka amiirka oo isna ku shahiiday duqeyn diyaaradaha mareykanka ay ka geysteen gobolka Baktiika ee wadanka afghanistan.
Sirdoonnada cadawga ayaa sheega in Taliban Pakistan ay taageero melleteri iyo mid dhaqaale ka hesho imaarada islaamiga Pakistan islamarkaana ay si xuriyad leh isaga kala gooshaan deegaannada xuduud beenaadka ah.
allaha unaxariistee almulla fadlullaah ayaa hoggaanka uqabtay xarakada Taliban Pakistan sanaddii 2013 wuxuuna caan ku ahaa in shacabka muslimiinta Pakistan ku booriyo in ay u dagaallamaan ku dhaqanka shareecada islaamka.